China BaGa4Se7 Crystals Manufacturer na Nweta | Dien
oghere oghere: Pc
Nzipu oke: 0.47-18μm
Isi NLO ọnụọgụ: d11 = 24 elekere / V
Zọ mbata (1μm, 5ns): 550MW / cm2
Igwe kristal dị elu nke BGSe (BaGa4Se7) bụ selenide analogue nke ngwakọta chalcogenide BaGa4S7, bụ nke a na-achọpụta usoro ihe omimi nke orthorhombic na 1983 ma kọọrọ mmetụta IR NLO na 2009, bụ kristal IR NLO mepụtara ọhụrụ. Enwetara ya site na usoro Bridgman – Stockbarger. Igwe kristal a na-ekpughere mgbasa ozi dị elu karịa ọtụtụ 0.47-18 μm, belụsọ maka elu absorption na gburugburu 15 μm.
FWHM nke (002) nke kachasị elu na-atụ egwu bụ ihe dịka 0.008 Celsius na ntụgharị site na efere a na-egbu maramara 2 mm (001) dị gburugburu 65% karịa ọtụtụ 1-14 μm. A tụrụ ọtụtụ ihe thermophysical na kristal.
Omume mgbasawanye ọkụ na BaGa4Se7 anaghị egosipụta anisotropy siri ike na αa = 9.24 × 10−6 K − 1, =b = 10.76 × 10−6 K − 1, na αc = 11.70 × 10−6 K − 1 tinyere isi atọ achara. . Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ / ọkụ na-arụpụta ihe na 298 K bụ 0.50 (2) mm2 s − 1 / 0.74 (3) W m − 1 K − 1, 0.42 (3) mm2 s − 1 / 0.64 (4) W m − 1 K − 1, 0.38 (2) mm2 s − 1 / 0.56 (4) W m − 1 K − 1, tinyere ndị a, b, c crystallographic axis karị.
Tụkwasị na nke ahụ, a tụrụ ọnụ ụzọ mbibi elu laser ka ọ bụrụ 557 MW / cm2 site na iji Nd: YAG (1.064 μm) laser n'okpuru ọnọdụ nke 5 ns pulse wide, 1 Hz frequency, na D = 0.4 mm ntụpọ nha.
BGSe (BaGa4Se7) kristal na-egosipụta ntụ ntụ ọhụụ nke abụọ (SHG) nke dị ihe dịka 2-3 ugboro AgGaS2. Ọnụ mbibi mbibi elu laser bụ ihe dịka 3.7 ugboro nke AgGaS2 kristal n'okpuru ọnọdụ yiri ya.
BGSe kristal nwere nnukwu nsogbu na-enweghị atụ, ma nwee ike inwe atụmanya sara mbara maka ngwa bara uru na mpaghara mpaghara IR dị egwu.
Uru maka mmepụta laser IR:
Adabara dị iche iche pumping isi iyi (1-3μm)
Wide tunable IR mmepụta nso (3-18μm)
OPA, OPO, DFG, intracavity / extravity, cw / usu mgbapụta
Ihe dị mkpa: Ebe ọ bụ na nke a bụ ụdị kristal ọhụrụ, n'ime kristal nwere ike ịnwe ọtụtụ streaks, mana anyị anaghị anabata nloghachi n'ihi ntụpọ a.
otu oghere Pc
Nnyefe nso 0.47-18μm
Isi NLO ọnụọgụ d11 = 24 elekere / V
Zọ mbata (1μm, 5ns) 550MW / cm2